Fitiavan-karena, tahotra ary mpandraharaha tsy nahomby | Martech Zone
Alahady, Jolay 25, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Ny fahasamihafana lehibe indrindra hitako tamin'ireo orinasa rehetra niasako tamin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana dia ny fahafahan'ny mpandraharaha na orinasa manatanteraka. Mahasosotra ahy ny mijery ireo namana sy mpiara-miasa amiko tsy mahatsapa ny fahombiazany satria tsy manatanteraka. Ny tahotra sy ny fitiavam-bola no zavatra roa hitako manakana ny mpandraharaha amin'ny lalany.
Ireto misy ohatra roa:
Mpandraharaha A manana vokatra tsara miasa fa tsy mivoatra, tsy manana marika ary tsy vonona amin'ny praiminisitra. Nandritra ny 3 taona dia mihodina ny kodiarany izy. Mafana ny vinavinany ary avy eo nangatsiaka izy ireo. Nanam-potoana ho an'ny mpiara-miasa manan-talenta izy, saingy nandany ny fotoanany izy ary namono azy ireo tamin'ny farany. Mikarakara taratasy kely ara-dalàna, marketing, ary izay rehetra misy ifandraisany amin'ny orinasa izy satria heveriny fa mahavita azy rehetra izy. 3 taona.
Andao lazaina fa ity orinasa ity dia ho orinasa 500k $ ao anatin'ny herintaona. Hatramin'izao, midika izany fa very $ 1 tapitrisa mahery izy ireo noho ny tsy fihetsik'izy ireo.
Andao lazaina fa mitentina 5 tapitrisa $ ny orinasa. Ny tompony dia tsy te-hanome ampahany lehibe amin'ny orinasa ho an'ireo izay afaka manampy azy hiala amin'ny tany. Heveriny fa raha manome 10% fanampiny amin'ny fananana izy dia manome $ 500k ho an'ny mpiara-miasa. Tadidinao fa vola 1 tapitrisa dolara very? Satria tsy nanome $ 500k ho an'ilay mpiara-miasa aminy izy, very vola 1 tapitrisa $ ankehitriny… ary azy ny ankamaroan'ny vola. Midika izany fa ny hamafin'ny fifampiraharahana amin'ny isan-jato ambany dia mitaky vola aminy. Toekarena hafahafa, fantatro.
Mazava ho azy, ny tena isan-jato dia tsy misy dikany raha tsy misy vola miditra ao aoriany. Ary raha mbola mitazona ny fananana maro an'isa izy dia mitazona ny lanjan'orinasa betsaka. 100% amin'ny orinasa iray mahatratra $ 100ka isan-taona dia $ 100k. Ny 51% an'ny orinasa iray mahatratra $ 500ka isan-taona dia mihoatra ny $ 250k isan-taona. Iza no tsy mivaky loha raha toa ka mahazo 10% fanampiny ny namanao… raha mampitombo ny faran'ny lalanao 250% ?! Tsy mahafoy zavatra ianao ary ny orinasanao dia sarobidy kokoa ary mahazo vola bebe kokoa ianao.
Mpandraharaha A tsy miala amin'ny asany mihitsy. Na, raha manao izany izy, dia natsangana niaraka tamin'ny olona izay tena tsy manana na inona na inona ampanjariam-bola ao amin'ny orinasa ka tsy mampidi-doza ary tsy mihetsika. 10 taona manomboka izao dia mbola mikitroka ny lohany amin'izay tsy nety izy - angamba manome tsiny ny talenta manodidina azy, tsy fantany fa safidiny izany.
Mpandraharaha B matahotra. Nahazo vokatra tsara izy izay manana zon'ny mpamorona, mari-pamantarana, ary patanty. Nandany vola be tamin'ny mpisolovava izy ary nandany ny fotoana hikarohany ny Internet ho an'ireo olona mety hampiasa ny marika amam-panaony amin'ny fanitsakitsahana. Tsy hiara-miasa amin'olona na iza na iza izy noho ny tahotra sao hangalarin'izy ireo ny heviny. Tsy matoky olona izy. Ary satria mifamatotra amin'ny ara-dalàna ny volany rehetra ary lany amin'ny fijerena olona 'mindrana' ny heviny ny volany - tsy mandroso mihitsy ny vokatra.
Misy zavatra tsara kokoa tonga ary nandevina ny Mpandraharaha B. Manontany tena izy ny amin'ny zava-nitranga androany androany.
Ireo mpandraharaha mahomby dia tsy mamela ny fitiavan-karena na tahotra hanakana azy ireo. Manaiky ny fahalemeny matihanina izy ireo ary mahita talenta handresena ireo. Tsy raharahian'izy ireo raha toa ka lasa milionera ny mpiasa tsirairay ankoatry ny harenany… raha ny marina dia mankafy ny fotoana hamoronana harena ho an'ny hafa izy ireo. Izy ireo koa dia tsy mandany fotoana amin'ny fifaninanana na amin'ireo mpanafika… mamono, manatanteraka, manatanteraka.
Tags: ny fandraharahanatahotrafitiavam-bola tafahoatra
Jul 26, 2010 amin'ny 7: 39 AM
Doug - Hevitra lehibe. Namaky lahatsoratra aho tamin'ity volana ity Harvard Biz Review izay nanantitrantitra fa ny paikady dia tsy tokony hisaraka amin'ny famonoana - tokony ho iray ihany izy ireo. Ny fitenenana mahazatra dia ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mahomby noho ny tsy fahampian'ny renivola. Mino aho fa noho ny tsy fahombiazan'ny ekipan'ny fitantanana izany. Noraisinao tsara ireo teboka ireo. Misaotra.
Jul 26, 2010 amin'ny 10: 13 AM
manatanteraka, manatanteraka, manatanteraka. Ny fomba hahombiazana dia ny mandeha ho azy fa tsy miandry azy ho tonga aminao. Teboka tsara eto.
Apr 11, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Raha tokony hanoratra ity lahatsoratra tsy misy dikany ity ianao, maninona raha mivoaka eny an-tsena ianao ary ho lasa mpandraharaha mahomby raha heverinao fa mora izany?
Apr 16, 2011 amin'ny 6: 11 AM
Eny ary! Nisy bandy manana anaram-bositra tsy mitonona anarana tonga nizara hevitra, momba ny lahatsoratra tsy ekeny! Mandehana amin'ny Internet!